Fonon'ny seza fidiovana China, 250 Sheets / fonosana, fonosana 20 fonosana / baoritra ary orinasa | Zhonghe
Toeram-pialana amin'ny kabine, 250 Sheets / fonosana, fonosana 20 / Carton
Fonon-seza fidiovana no natao mba hanomezana fahadiovana ambony sy fiarovana ny tena ao amin'ny trano fidiovana: karazana 250 eo ho eo isaky ny fonosana, fonosana 20 isaky ny boaty iray, totalin'ny 5000
1/2 Taratasy Fonenana Toilet Toilet, Fonon-taratasy Afovoany
Fenoy amin'ireto fonosana fidiovana taratasy fotsy ireto ireo mpaninjara trano fidiovana.
Mampiroborobo ny fahadiovana amin'ny efitrano fidiovana iraisana miaraka amin'ireo fonosana fipetrahana taratasy fidiovana maharitras. Ny famolavolana antsasaky ny sosona dia mora apetraka, raha tsy manimba ny rafitra septika kosa ny fanamboarana mora simba. Ny fonosana tsirairay dia misy fonony 250, mampihena ny fitsidihana fikarakarana ho an'ny refill. Miaraka amin'ny fonosana 20 ao anaty baoritra, ireo fonosana fipetrahana fidiovana fotsy ireo dia safidy lehibe ho an'ny birao lehibe na toerana ara-barotra.
Ny fonon'ny seza fidiovana dia natao hanomezana fahadiovana ambony sy fiarovana ny tenany manokana ao amin'ny trano fidiovana
Karazan-tsolika: antsasaky ny vala, 1/2 heny
Takelaka 250 isaky ny fonosana, fonosana 20 isaky ny baoritra, ravina 5000 feno
Flushable ho an'ny fiarovana ara-pahasalamana
Vita tamin'ny taratasy fanodinana 100%
Mihaona na mihoatra ny fenitra Green Seal
Mampiroborobo ny fanadiovana: manome sakana fiarovana eo anelanelan'ny tsirairay sy ny seza fidiovana.
Mahomby: Miparitaka tsirairay indray mandeha monja amin'ny rantsantanana iray fotsiny
Mora ampiasaina: Tsy ilaina ny mifikitra, mandrovitra na mamelatra. Avy hatrany amin'ny dispenser mankany amin'ny fipetrahana.
Fanariana tsotra: Tapahina ho faty ny faritra afovoany ary manintona ny seza fidiovana manarona ny tatatra aorian'ny fivoahan'ny trano fidiovana.
Sariaka amin'ny tontolo iainana: Azo soloina rano tanteraka, azo antoka ho an'ny rafitra fantson-drano rehetra.
* Fahasalamana sy filaminana
Misoroka ny fitomboan'ny bakteria, manala ny fahalotoan'ny fiampitana ary manampy amin'ny fisorohana ny tsy fahazoana aina ara-tsaina vokatry ny fifandraisana mivantana amin'ny fonon'ny fidiovana.
* SORATRA 100%
Mampiasà fitaovana biodegradable. Mety levona ny rano. Ny fonony seza fidiovana taratasy azo esorina rehefa avy ampiasaina.
* DESIGN fandefasana
Ny sarony misarona mivalona dia mifanentana amin'ireo mpaninjara fonenana malaza rehetra.
* MALALAKA SY MORAONANA
Malemy sy milamina ilay taratasy miaraka amina fifandraisan'ny hoditra mahazo aina.
Teo aloha: Fonosana fonosana fanamoriana taratasy tsy azo ampiasaina, azo esorina, fonosana 5, 250 ct tsirairay avy
Manaraka: Fonony sezika am-polony
fonosana fipetrahana taratasy fidiovana maharitra